Kunyangwe Hove Dzevakafa | Martech Zone
Kunyangwe Hove Yakafa Inoyerera
Svondo, November 22, 2009 China, Gumiguru 4, 2012 Matt Nettleton
Kukura kwangu ndakarerwa neanotarisira uye asina tariro, Amai vangu vangangodaro vaive munhu anofara kupfuura vese shamwari yaunogona kusangana navo. Akave nechokwadi chekuti ndakarerwa nepfungwa dzakawanda, ndisingade chero chinhu chakanaka kune wese munhu uye ndichiita nepandinogona napo kubatsira vanhu kubuda. Pandakatanga kudzidza nekukura ndakamubvunza nezvekuti sei aibatsira vamwe vanhu vaaisada uye mhinduro yake yaive yakapusa.
Matt munhu wese anogona kuve zvirinani uye kuvabatsira kunobatsira nharaunda. Rangarira "mafungu ari kusimuka anosimudza zvikepe zvese". Handina kuziva kuti iye meseji yaive meseji hombe yandaizotora ndichidzidza nezve economics gare gare ini ndichienda kukoreji. Zvekare zvakare ndakadzidza kuti kana totaura nezvehupfumi, kana zvinhu zvanaka "mafungu ari kusimuka anosimudza zvikepe zvese."
Makore ekukura ema90's akanyatsoratidza Amai vangu uye mapurofesa angu econ vese vaive nyanzvi. Kwemakore anopfuura gumi nemashanu (kusvika 15) kuwedzera kwehupfumi hwenyika kwakasimudza chikepe chevanhu vese. Kune mazhinji emabhizimusi madiki makore iwayo aive akanaka, vatengi vaive vakawanda, purofiti yaive yakagadzikana uye nekumwe kuedza zvaive nyore kubuda uye kuwana vakagadzirira vane tarisiro yekugona uye vanokwanisa yekuwedzera mari yako.
Muna 2008, imwe hafu yemeseji yemubereki wangu yakatanga kuita zvine musoro. My Dad is a great guy asi zvakasiyana naAmai vangu aive akanaka pakuchengeta pfungwa dzake dzakanangisa padivi peizvo chaiitika chaizvo. Meseji yake kwandiri yaive yakati siyanei. Akandiudza Kunyange hove dzakafa dzinoyangarara. Zvaaireva ndezvekuti kana masaisai achisimuka zvese zvinokwira asi kwete zvese igwa. Pfungwa yake yaive yakapusa, hupfumi hwakaipa haugadzi kushaya simba, hupfumi hwakaipa hunofumura kushaya simba.
Kwemakore mashoma apfuura tanga tichidzidza kugara neshoko raBaba vangu. Uye neWE, ndinoreva hupfumi hweAmerica. Isu takaona huwandu hukuru hwemabhizinesi akaita sarudzo dzakaipa. Uye apo nguva dzaive nyore sarudzo idzodzo dzaitaridzika kunge dzakanaka, pakange pasina matambudziko chaiwo kana mhedzisiro yesarudzo dzakaipa. Asi patinongorovera padundundu mumugwagwa mhedzisiro iyi yakafumurwa uye kazhinji kazhinji iko kuratidzwa kwakatungamira kukundikana kune njodzi.
Semudzidzisi wekutengesa, ndinopedza mazuva angu ndichishanda nevaridzi vebhizimusi vari kuona rumwe rutivi rutsva rwebhizimusi ravo. Vatengesi vavaifunga kuti vakakura vakazoonekwa kuti hapana chavaiita kunze kwekukwira mafungu evashoma makiyi vatengi vaikura. Vatengesi avo vaida kucheka mutengo mudiki munguva dzakanaka vari kuurawa izvozvi sezvo vasina chavanodzokera nacho kunze kwekutema mitengo.
Ivo vatengesi avo vaisatarisira tarisiro vakatarisa yavo yekutengesa vhoriyamu ichidonha izvozvi vakwikwidzi vari poaching maakaundi avo. Makore maviri apfuura hutera uhwu hunogona kunge husina kukosha, hupfumi hwaive hwakasimba, vatengi vaive vakawanda uye margins aive akagwinya. Hupfumi hwakanga huchikura uye hune michina yekutengesa isina kusimba uye zvikwata zvisiri izvo zvekutengesa zvaive matambudziko, asi aingova matambudziko akakura zvakakwana kugadzirisa.
Nhasi zvasiyana, bhizinesi rako riri kubatwa senhapwa. Chikwata chako chekutengesa chiri mukutonga ramangwana rako uye kunze kwekunge iwe uchiziva kuti vari kushanda kubva kurudyi zano, muchimiro chakakodzera uye vane hunyanzvi hwakakodzera kunyangwe iko kupora kunenge kuri kunetsa.
Tags: bluetooth kushambadzira
Matt Nettleton ane simba rakakura, rine simba rekutengesa timu mutungamiriri uye murairidzi ane chishuwo chemhedzisiro uye yakaratidza track rekodhi. Ndine makore anopfuura makumi maviri nemashanu ezviitiko anotangisa shanduko kuzadzisa zvinangwa uye kugadzirisa zviwanikwa zvekuwedzera kwemari, manejimendi manejimendi uye kukura kwemubereko.
Nyanzvi Yekutengesa: West Baden
Kutarisa Yako Pamhepo Kushambadzira Referensi
Mbudzi 22, 2009 na2: 53 PM
Ida chirevo. Ihama yepedyo here "Kunyange wachi rakatyoka rakarurama kaviri pazuva?"